DF Somalia oo markale iclaamisay dagaal ka dhan ah Al Shabaab | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo markale iclaamisay dagaal ka dhan ah Al Shabaab
DF Somalia oo markale iclaamisay dagaal ka dhan ah Al Shabaab
(Muqdisho) 23 Maarso 2019 – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray Taliska Howl-galka AMISOM iyo dawladaha Soomaaliya ka taageera amniga iyo la dagaalanka Argagaxisada, sida ay faafisay Wakaaladda Wararka SONNA.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulanka ka tilmaamay in aan loo sii dul qaadan karin in kooxaha arxan-laawayaasha ah ay sii dhibaateeyaan dalka ayaa dhamaan ka qayb galayaasha kulanka waxa uu ka dalbaday in dagaalka argagaxisada loo wajaho si wadajir ah laguna gacan siiyo dawladda sidii ay dalka oo dhan uga dhigi lahayd mid nabdoon.
Hoggaanka dawladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad ay u tahay sugidda amniga mawaadiniinta Soomaaliyeed maalkooda iyo gayiga Soomaaliya guud ahaan ayaa wada qorshe uu ku doonayo in lagu soo afjaro ficillada gurraca ee kooxaha nabad-diidka ah ay ku diidanyihiin horumarka dalka.
DF Somalia ayaa marar badan horay ugu baaqday dagaallo ay sheegtay inay dalka uga xoraynayso kooxda xag-jirka ah ee Al Shabaab oo dhibaato ba’an shacabka ku haysa.
Previous article”Inter waxay ahayd koox quruntey!” – Frank de Boer oo markale weeraray kooxdiisii hore
Next articleGOOGOOSKA: Italy vs Finland 2-0